သငျ့ခွထေောကျကပွောပွတဲ့ သငျ့အကွောငျး – Media9
October 4, 2018 by media9
အင်္ဂဝိဇ္ဇာ နဲ့ လက္ခဏာပညာတွေဆိုတာ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကတည်းက ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့တာပါ။ သင့်ခြေဖဝါးပုံစံနဲ့ အနေအထားကိုကြည့်ပြီး သင့်စိတ်ကိုခန့်မှန်းလို့ရတယ်ဆိုတာကိုရော သင်သိပါသလား? ဟုတ်ကဲ့ တကယ်ပြောနေတာပါ။ သင့်ခြေဖဝါးရဲ့ ပုံသဏ္ဌာန် အရွယ်အစားနဲ့ အနေအထားကိုကြည့်ပြီး သင့်အကြောင်းတွေ ပြောပြနိုင်ပါတယ်။
သင့်ခြေမကိုခုပဲ ငုံ့ကြည့်လိုက်ပါ ခြေညှိုးထက်ရှည်နေလား တိုနေလား ဒါမှမဟုတ် ကြက်ခြေခတ်ဖြစ်နေလား ? အကယ်၍ ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ထူးခြားတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တစ်ခု ရှိကိုရှိနေပါတယ်။ ဒီတော့ သေသေချာချာ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ အောက်မှာတော့ ခြေဖဝါးပုံသဏ္ဌာန်ဆယ်မျိုးနဲ့ ယင်းခြေထောက်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို ပြောပြာထားပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ရအောင်နော်။
ခြေချောင်းတွေအားလုံး အတိုအရှည်ညီနေတဲ့အခါ သင့်ခြေဖဝါးကလေးထောင့်စပ်စပ် ကျနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို လေ့ထောင့်ခြေဖဝါးပိုင်ရှင်လို့ မှတ်ယူကြပါတယ်။ တောင်သူလယ်သမား ခြေဖဝါးလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုဖဝါးမျိုးရှိသူတွေက သတိကြီးကြီး ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင် တစ်ခုခုမလုပ်လိုက်ခင်မှာ အသေးစိတ် အချက်ကလေးတွေကအစ စေ့စေ့စပ်စပ်ကြည့်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်တတ်ကြပါတယ်။ ယုတ္တိရှိရှိနဲ့ လက်တွေ့ကျတာတွေကိုသာ နှစ်သက်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီး အလွန်အားကိုးအားထား ပြုနိုင်သူများလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဂရိခြေဖဝါးကို မီးတောက်ဖဝါးလို့လည်း ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုခြေဖဝါးရှိသူတွေရဲ့ ခြေညှိုးဟာ ခြေမထက်ပို ရှည်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ စိတ်ဓါတ်ခွန်အား ပေးနိုင်သူများဖြစ်ကြပြီး ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးမှာ စိတ်အား ထက်သန် တက်ကြွတတ်သူတွေလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီခြေဖဝါးပိုင်ရှင် အများစုမှာ ခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ အရည် အချင်းများ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ပိုမိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိပြီး စိန်ခေါ်ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေကို တက်ကြွစွာလက်ခံကြသူများ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာလည်း စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်တတ်သလို စိတ်တိုင်းမကျတဲ့အခါကျရင်လည်း သူများကိုဆရာကြီးလုပ်တတ် ကြသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီခြေဖဝါးမျိုးကတော့ အများစုမှာရှိတတ်တဲ့ခြေဖဝါးမျိုးပါပဲ။ ခြေချောင်းအားလုံးလည်း အချိုးအစားညီကြတယ် ခြေမကလည်း ကျန်ခြေချောင်းတွေ ထက်ရှည်ပါတယ်။ ဒီခြေဖဝါးပိုင်ရှင်တွေက အပေါင်းအသင်းဝင်ဆံ့သလို ခင်တတ်မင်တတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာကိုယ်စွမ်းကိုယ်စထူးခြားပြီး ထူးခြားတဲ့အရှိန်အဝါရှိသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင်းတတ်သင်းတတ်ပြီး စည်းစနစ်ကျကျနေတတ်သူများ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေပေါ်လိုက်ပြီး ဘယ်လိုပြုမူရမယ် ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာတွေ ကောင်းကောင်းသိတာကြောင့် လုပ်မှုကိုင်မှု ဗျူဟာကောင်းတဲ့သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စွန့်စားတတ်ပြီး တစ်ပါးသူပြောတာ ကောင်းကောင်း နားထောင်တတ်တယ်။ သူများအပေါ်မလွှမ်းမိုးဘဲ ကိုယ့်အယူအဆကို ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ အလွန်တော်တယ်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းလည်း အရမြန်တတ်ပါတယ်။
ခြေချောင်းအားလုံးက ဖျစ်ညှစ်ထားသလိုမျိုးစုနေပြီး ဒီလိုခြေဖဝါးတွေဟာ သေးသေးသွယ်သွယ်ပဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ အားလုံးထဲမှာခြေမက အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး နောက်ခြေချောင်းတွေကတော့ အစဉ်လိုက် သေးသွားပါတယ်။ ဒီလိုခြေဖဝါးရှိတဲ့သူတွေက သီးသန့်သဘောဆန်ပြီး ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် အေးအေးနေချင် သူများပဲဖြစ်ပါတယ်။ သိုသိုသိပ်သိပ်နေတတ်ပြီး တခြားသူတွေကို သူတို့အကြောင်း မပြောပြကြပါဘူး။ တဇွတ်ထိုးပြုမူတတ်ပြီး ကိုယ့်ဒေါသကိုယ် မထိန်းနိုင်သူများလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ခြေသန်းသိမ်ခြေဖဝါးရှိသူများဟာ ပြောမရဆိုမရသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ အရာရာကို မိမိတို့စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်ချင်သူများလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီခြေဖဝါးပိုင်ရှင်များဟာ အလုပ်မစခင်ကြိုတင်စီစဉ်ကြသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ စည်းစနစ်ကြီးပြီး မိမိကိုယ်ကို ကောင်းကောင်းချုပ်ထိန်းနိုင်သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခြေသန်းခွာမရသော ခြေဖဝါးပိုင်ရှင်များဟာ ၎င်းတို့နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်နေကျ လုပ်ငန်းအတိုင်းသာ လိုက်နာလိုသော ဆန္ဒရှိသူများဖြစ်ပါတယ်။ သစ္စာအလွန်ရှိပြီး လက်တွဲဖော်ကောင်းများလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ခြေသန်းခွာနိုင်တဲ့ခြေဖဝါးပိုင်ရှင်တွေဟာ ပြောင်းလဲမှုအသစ်များ အမြဲရှာဖွေနေကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်လွယ်နဲ့ရိုးအီသွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီိစိတ်ထားကြောင့်လည်း စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ အမြဲဆိုသလို သုန်မှုန်နေတတ်ပါတယ်။
၉။ ခြေညှိုးနှင့်ခြေခလယ်ကြား ကွာဟနေသောခြေဖဝါး
သင့်ခြေညှိုးနဲ့ခြေခလယ်ကြားမှာ ကွာဟနေတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာဘာကိုမှ လွယ်လွယ်နဲ့ စွဲလမ်းမှု မရှိတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေထဲကလည်း လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ရုန်းထွက်တတ်ပါတယ်။
ဒီလိုခြေဖဝါးရှိသူတွေဟာ စိတ်ခံစားမှု အလွန်ဖော်ပြတတ်သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားသူများအပေါ်လည်းအလွန် လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ သူတို့ပျော်နေရင် အနားရှိသမျှလူများပါ အကုန်ပျော်ရတတ်ပြီး ဝမ်းနည်းရင်တော့ သူတို့ဘာသာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေးနေလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
အင်ျဂဝိဇ်ဇာ နဲ့ လက်ခဏာပညာတှဆေိုတာ ဟိုးရှေးရှေးတုနျးကတညျးက ထငျပျေါကြျောကွားခဲ့တာပါ။ သငျ့ခွဖေဝါးပုံစံနဲ့ အနအေထားကိုကွညျ့ပွီး သငျ့စိတျကိုခနျ့မှနျးလို့ရတယျဆိုတာကိုရော သငျသိပါသလား? ဟုတျကဲ့ တကယျပွောနတောပါ။ သငျ့ခွဖေဝါးရဲ့ ပုံသဏ်ဌာနျ အရှယျအစားနဲ့ အနအေထားကိုကွညျ့ပွီး သငျ့အကွောငျးတှေ ပွောပွနိုငျပါတယျ။
သငျ့ခွမေကိုခုပဲ ငုံ့ကွညျ့လိုကျပါ ခွညှေိုးထကျရှညျနလေား တိုနလေား ဒါမှမဟုတျ ကွကျခွခေတျဖွဈနလေား ? အကယျ၍ ဟုတျတယျဆိုရငျတော့ ထူးခွားတဲ့ အဓိပ်ပါယျတဈခု ရှိကိုရှိနပေါတယျ။ ဒီတော့ သသေခြောခြာ လလေ့ာကွညျ့ကွရအောငျ။ အောကျမှာတော့ ခွဖေဝါးပုံသဏ်ဌာနျဆယျမြိုးနဲ့ ယငျးခွထေောကျပိုငျရှငျတှရေဲ့ စိတျနစေိတျထားကို ပွောပွာထားပါတယျ။ လလေ့ာကွညျ့ရအောငျနျော။
ခွခြေောငျးတှအေားလုံး အတိုအရှညျညီနတေဲ့အခါ သငျ့ခွဖေဝါးကလေးထောငျ့စပျစပျ ကနြပေါလိမျ့မယျ။ ဒါကို လထေ့ောငျ့ခွဖေဝါးပိုငျရှငျလို့ မှတျယူကွပါတယျ။ တောငျသူလယျသမား ခွဖေဝါးလို့လညျးချေါကွပါတယျ။ ဒီလိုဖဝါးမြိုးရှိသူတှကေ သတိကွီးကွီး ထားတတျကွပါတယျ။ ဆုံးဖွတျခကျြမခခြငျ တဈခုခုမလုပျလိုကျခငျမှာ အသေးစိတျ အခကျြကလေးတှကေအစ စစေ့စေ့ပျစပျကွညျ့ပွီးမှ ဆုံးဖွတျလုပျကိုငျတတျကွပါတယျ။ ယုတ်တိရှိရှိနဲ့ လကျတှကေ့တြာတှကေိုသာ နှဈသကျတတျပါတယျ။ ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးမှာမဆို အေးဆေးတညျငွိမျပွီး အလှနျအားကိုးအားထား ပွုနိုငျသူမြားလညျး ဖွဈကွပါတယျ။
ဂရိခွဖေဝါးကို မီးတောကျဖဝါးလို့လညျး ချေါတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုခွဖေဝါးရှိသူတှရေဲ့ ခွညှေိုးဟာ ခွမေထကျပို ရှညျပါတယျ။ သူတို့တှဟော စိတျဓါတျခှနျအား ပေးနိုငျသူမြားဖွဈကွပွီး ဆိုငျရာနယျပယျအသီးသီးမှာ စိတျအား ထကျသနျ တကျကွှတတျသူတှလေညျး ဖွဈကွပါတယျ။ ဒီခွဖေဝါးပိုငျရှငျ အမြားစုမှာ ခေါငျးဆောငျတို့ရဲ့ အရညျ အခငျြးမြား ရှိတတျကွပါတယျ။ ပိုမိုဖနျတီးနိုငျစှမျးရှိပွီး စိနျချေါယှဉျပွိုငျမှုတှကေို တကျကွှစှာလကျခံကွသူမြား လညျးဖွဈပါတယျ။ တဈခါတဈရံမှာလညျး စိတျလိုကျမာနျပါလုပျတတျသလို စိတျတိုငျးမကတြဲ့အခါကရြငျလညျး သူမြားကိုဆရာကွီးလုပျတတျ ကွသူမြားလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒီခွဖေဝါးမြိုးကတော့ အမြားစုမှာရှိတတျတဲ့ခွဖေဝါးမြိုးပါပဲ။ ခွခြေောငျးအားလုံးလညျး အခြိုးအစားညီကွတယျ ခွမေကလညျး ကနျြခွခြေောငျးတှေ ထကျရှညျပါတယျ။ ဒီခွဖေဝါးပိုငျရှငျတှကေ အပေါငျးအသငျးဝငျဆံ့သလို ခငျတတျမငျတတျသူတှဖွေဈပါတယျ။ သူတို့ဟာကိုယျစှမျးကိုယျစထူးခွားပွီး ထူးခွားတဲ့အရှိနျအဝါရှိသူမြားလညျး ဖွဈပါတယျ။ ပေါငျးတတျသငျးတတျပွီး စညျးစနဈကကြနြတေတျသူမြား လညျးဖွဈပါတယျ။ အခွအေနပေျေါလိုကျပွီး ဘယျလိုပွုမူရမယျ ဘယျလိုနထေိုငျရမယျဆိုတာတှေ ကောငျးကောငျးသိတာကွောငျ့ လုပျမှုကိုငျမှု ဗြူဟာကောငျးတဲ့သူမြားလညျး ဖွဈပါတယျ။ စှနျ့စားတတျပွီး တဈပါးသူပွောတာ ကောငျးကောငျး နားထောငျတတျတယျ။ သူမြားအပျေါမလှမျးမိုးဘဲ ကိုယျ့အယူအဆကို ဖျောပွတဲ့နရောမှာ အလှနျတျောတယျ။ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးလညျး အရမွနျတတျပါတယျ။
ခွခြေောငျးအားလုံးက ဖဈြညှဈထားသလိုမြိုးစုနပွေီး ဒီလိုခွဖေဝါးတှဟော သေးသေးသှယျသှယျပဲ ရှိတတျပါတယျ။ အားလုံးထဲမှာခွမေက အကွီးဆုံးဖွဈပွီး နောကျခွခြေောငျးတှကေတော့ အစဉျလိုကျ သေးသှားပါတယျ။ ဒီလိုခွဖေဝါးရှိတဲ့သူတှကေ သီးသနျ့သဘောဆနျပွီး ကိုယျ့သဘောနဲ့ကိုယျ အေးအေးနခေငျြ သူမြားပဲဖွဈပါတယျ။ သိုသိုသိပျသိပျနတေတျပွီး တခွားသူတှကေို သူတို့အကွောငျး မပွောပွကွပါဘူး။ တဇှတျထိုးပွုမူတတျပွီး ကိုယျ့ဒေါသကိုယျ မထိနျးနိုငျသူမြားလညျးဖွဈပါတယျ။
ခွသေနျးသိမျခွဖေဝါးရှိသူမြားဟာ ပွောမရဆိုမရသူမြားဖွဈကွပါတယျ။ အရာရာကို မိမိတို့စိတျတိုငျးကြ ဖွဈခငျြသူမြားလညျး ဖွဈကွပါတယျ။
ဒီခွဖေဝါးပိုငျရှငျမြားဟာ အလုပျမစခငျကွိုတငျစီစဉျကွသူမြားဖွဈကွပါတယျ။ စညျးစနဈကွီးပွီး မိမိကိုယျကို ကောငျးကောငျးခြုပျထိနျးနိုငျသူမြားလညျး ဖွဈပါတယျ။
ခွသေနျးခှာမရသော ခွဖေဝါးပိုငျရှငျမြားဟာ ၎င်းငျးတို့နစေ့ဉျလုပျဆောငျနကြေ လုပျငနျးအတိုငျးသာ လိုကျနာလိုသော ဆန်ဒရှိသူမြားဖွဈပါတယျ။ သစ်စာအလှနျရှိပွီး လကျတှဲဖျောကောငျးမြားလညျးဖွဈပါတယျ။
ခွသေနျးခှာနိုငျတဲ့ခွဖေဝါးပိုငျရှငျတှဟော ပွောငျးလဲမှုအသဈမြား အမွဲရှာဖှနေကွေသူမြား ဖွဈပါတယျ။ လှယျလှယျနဲ့ရိုးအီသှားတတျပါတယျ။ အဲဒီစိတျထားကွောငျ့လညျး စိတျမခမျြးမသာဖွဈရတတျပါတယျ။ အမွဲဆိုသလို သုနျမှုနျနတေတျပါတယျ။
၉။ ခွညှေိုးနှငျ့ခွခေလယျကွား ကှာဟနသေောခွဖေဝါး
သငျ့ခွညှေိုးနဲ့ခွခေလယျကွားမှာ ကှာဟနတေယျဆိုရငျတော့ သငျဟာဘာကိုမှ လှယျလှယျနဲ့ စှဲလမျးမှု မရှိတတျသူဖွဈပါတယျ။ နစေ့ဉျလုပျငနျးဆောငျတာတှထေဲကလညျး လှယျလှယျကူကူနဲ့ ရုနျးထှကျတတျပါတယျ။
ဒီလိုခွဖေဝါးရှိသူတှဟော စိတျခံစားမှု အလှနျဖျောပွတတျသူမြား ဖွဈပါတယျ။ တခွားသူမြားအပျေါလညျးအလှနျ လှမျးမိုးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ သူတို့ပြျောနရေငျ အနားရှိသမြှလူမြားပါ အကုနျပြျောရတတျပွီး ဝမျးနညျးရငျတော့ သူတို့ဘာသာ လှတျလှတျလပျလပျ ပေးနလေိုကျတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
အာကာသသို့ ဓါတျလှခေါးထောငျနိုငျဖို့ သိပျမဝေးတော့ဟု နာဆာက ပွော
အယျနီညိုရာသီဥတုဖွဈပျေါနိုငျသညျ့အတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျကွရနျ ဒေါကျတာထှနျးလှငျအကွံပေး